के तपाई जुठो र बासी खानेकुरा फाल्नुहुन्छ ? त्यसोभए यसो गर्नुस्
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००६:१२0
काठमाडौँ । हामी प्राय दैनिकजसो खाएर बाँकी रहेको जुठो र बासी खानेकुरा फ्यकिरहेका हुन्छौँ । जुन खानेकुरा हामी डस्बिनमा हालेर होस् या अन्य ठाँउमा जथाभावी मिल्काउछौँ । त्यतिमात्र होइन् , हामी होटल तथा रेष्टुरेन्टमा गएर
काठमाडौँ । हिन्दू धर्म अनुसार गौमुत्रलाई पवित्र चीज मानिन्छ । किनभने गाईको पिसाबले मानिसहरुको मृत्यु भएको बेला चोख्याइने गरिन्छ । त्यस्तै अन्य पुजा आरधना गर्दा पनि गहुतको रुपमा गौमुत्र प्रयोग गरिन्छ । तर केही मानिसहरुको
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००५:४७0
काठमाडौँ । बजारमा सामाग्रीको माग अनुसार मूल्य पनि बढिरहेको हुन्छ । त्यस्तै विश्वमा यस्ता तरकारीहरु रहेका छन् । जसको मूल्य विश्वकै सबैभन्दा महँगो रहेको छ । सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ला तर विश्वमा पाइने तरकारीहरु मध्ये होप
हेर्नुहोस् ! आज भन्दा ३०० वर्ष पहिले यस्ता औजारको प्रयोगद्धार गरिन्थ्यो बिरामीको अप्रेशन
काठमाडौँ । पछिल्लो समय प्रविधिको विकास अत्याधिक रुपमा अगाडी बढेको छ । तर आज भन्दा ३ सय ४ सय वर्ष अगाडी सल्यक्रिया गर्नको लागि खतरनाक हतियारहरुको प्रयोग गरिन्थ्यो । जुन अहिले देख्दा र सम्झिदा पनि
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०११:००0
काठमाडौँ । अम्बा एक प्रकारको मिठो फल हो । यसमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन ए,बी तथा सी पाइन्छ । अपच, ग्यास्टिक आदिका लागि अम्बा निकै लाभदायी मानिन्छ ।आज त्यही अम्बा खानुको फाइदाबारे कुरा गर्दै छौ ।
काठमाडौँ । बर्ड फ्लुको कारण अन्य देशहरुमा मानिसको मृत्यु हुने गरेको सुन्ने गरेका थियौ । तर पछिल्लो केही समय अगाडी नेपालमा नै बर्ड फ्लुको संक्रमणबाट एक नेपालीको मृत्यु भएको छ । केही ठाउँमा कुखुराको मासु
किन प्रश्न सोध्दा रिसाए ऋषि धमला ? झण्डै भयो अन्तरर्वातामै हात हालाहाल (भिडियो)
काठमाडौँ । यो संसारमा हरेक मानिसहरु आफ्नो बारेमा राम्रो भन्यो धेरै खुसी हुन्छन् । तर त्यही मानिसहरुको नकरात्मक कुरा गर्यो रुष्ट भैदिन्छन् । त्यसपछि निकटतम सम्बन्धमा पनि चिसोपना आउँछ । आज हामी त्यस्तै एक अन्तवार्ताको
सर्पले टोक्ने बित्तिकै अपनाउनुहोस् यी उपाय जसले बचाउनेछ व्यक्तिको ज्यान
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००५:५९0
काठमाडौँ । वर्षायाम सुरु भएसँगै सर्पको बिगबिगी पनि बढ्ने गर्छ । वर्षेणी सर्पले टोकेकै कारण ज्यान गुमाउनेहरुको सख्या बढ्दै गएको पाइन्छ । जब व्यक्तिलाई सर्पले टोक्छ त्यसपछि सर्पको विषले गर्दा व्यक्तिको शरिरमा तुरुन्तै परिवर्तन हुने
के तपाईको ब्लड प्रेसर लो छ ? त्यसो हो भने अपनाउनुहोस् यी उपाय
काठमाडौँ । अस्तव्यस्त खानपान र परिवर्तनशिल दैनिक जीवनयापनको कारण पछिल्लो समय मानिसमा विभिन्न किसिमका समस्याहरु देखिन थालेका छन् । अस्तव्यस्त दिनचार्यको कारण खानपानमा राम्रो ख्याल नगर्दा रक्तचापमा समस्या आउने गर्छ । शरिरमा सामान्य भन्दा बढी